वैधानिक विद्रोहका लागि चुनावको उपयोग : अध्यक्ष, गोविन्द बोहोरा (ब्रमाण्ड) — Motivate News
वैधानिक विद्रोहका लागि चुनावको उपयोग : अध्यक्ष, गोविन्द बोहोरा (ब्रमाण्ड)
Posted on December 3, 2017 by motivate news
काठमाडौँ – हाम्रो पाटी नेपालका अध्यक्ष गोविन्द बोहोर (ब्रमाण्ड)ले बैधानिक विद्रोहका लागि आफू चनावलाई उपयोग गर्न उमेद्वारी दिएको बताएका छन् । उनी प्रतिनिधि सभाका लागि काठमाडौँ ५ बाट गालाकार भित्रको षढ्कोण चुनाव चिन्ह लिएर चुनाव लड्दै छन् । यस क्षेत्रमा एमाले महासचिव इश्वर पोखरेल र काँग्रेसका नेता प्रकाशसरण महत चुनावि प्रतिशपर्धामा छन् । के हो त बैधानिक विद्रोह र उनका चुनावि एजेण्डामा बारेमा हामीले केही कुराकानि गरेका छौँ । प्रस्तुत छ सोही कुराकानीको सम्पादित अंशः
तपाईको उमेद्वारी किन ?
मेरो उमेद्वारी हराइएको राष्ट्र खोज्नका लागि, लुकाइएको नेपाल राष्ट्र खोस्नको लागि हो । यो भनेको के हो भने, हाम्रो देशको भाषा, धर्म, संस्कृति विश्वमा नेपाल फरक परिचानको राष्ट्र थियो । मान्छे कसरी अगाडी बढ्नुपर्छ, कसरी बाँच्नुपर्छ, पृथ्वीलाई कसरी बचाउनुपर्छ यी तिन विश्वले हामीलाई चिन्ने हाम्रा सभ्यता हुन् । अहिले सभ्यता हराएको र हराएको सभ्यता खोज्नु छ भनेको हो । त्यस्तै अर्को हामी सार्वभोम सम्पन्न मुलुक भन्छौँ, २००७ साल भन्दा अगाडी देखि सार्वभोम सम्पन्न छैन । नेपालको सार्वभोम सत्ता अहिले दिल्लीमा छ, यूरोपियन देशहरुमा छ पश्चिामा मुलुकहरुमा निहित छ । त्यसलाई उनीहरुबाट खोसेर नेपालमा सार्वभोम सक्ता सम्पन्न देशको स्थापना गर्नुछ भनेका छौँ ।
र अर्को पुराना पार्टीहरुले र सरकारले राष्ट्रका विरुद्ध गरेका विभिन्न राष्ट्रघाती सन्धिसम्झौताहरु, जसले राष्ट्रलाई सिध्यायो ति सन्धि सम्झातालाई खारेज गर्नका लागि हाम्रो उम्द्वारी हो ।
तपाईको आफ्नै पार्टीको खास अस्तित्व छैन, चर्चा पनि छैन, तपाईको उमेद्वारीले केही मुल्य राख्छ र ?
मुल कुरो उम्द्वारी मात्र ठुलो कुरा होइन, चुनाव मात्र ठुलो कुरा होइन । मुल कुरो त राष्ट्रिय राजनितिमा नयाँ एजेण्डा चाहिन्छ की चाहिदैन भन्ने हो । नयाँ मुद्धा चाहिन्छकी चाहिँदैन ? राष्ट्रिय राजनितिमा राष्ट्रनिति चाहिन्छ की चाँहिदैन ? हाम्रो किन उदय भयो ? हामीले चुनावलाई टेक्ने भनेका छौँ । हाम्रो किन उदय भयो भन्दा अहिलेसम्मका राजनितिक पार्टीले राष्ट्रनिति बनाएनन् । जनतालाई सहि राष्ट्रनिति दिन, देशलाई मुक्ति दिनका लागि र राष्ट्रिय राजनितिमा एउटा नयाँ विचाराको उदय गराउनका लागि हामी उमेद्वारी दिएका छौँ । यो उमेद्वारीमा टेकेर जनता माझ देशको राष्ट्रवादी एजेण्डा के हो, त्यो स्पष्ट पार्नका लागि आफ्ना एजेण्डा स्थापित गर्नका लागिका हाम्रो पार्टी नेपालले उम्द्वारी दिएको हो ।
तपाईको पार्टी के लागि ?
हामी यो देशको मुल राजनिति शक्ति नभइकन हाम्रो नेपाल राष्ट्र मुक्त हुने हामी देख्दैनौँ । अव हामी नेपाली राष्ट्रवादी यूवाहरुले यो देशलाई मुक्त गराउने नयाँ राजनिति शक्तिलाई नयाँ विचारमा उदय गराउन जरुरी छ । नोपलतन्त्र, नेपालबाट हाम्रो नयाँ राजनितिक कायदिशा हो । नेपालतन्त्र र नेपालबादको मुल आधार, कार्यकारी राष्ट्रपति, हिन्दुराराष्ट्र र जनताको अधिकार सहितको नयाँ राजनितिक कार्य दिशा सहितको नयाँ सत्ता स्थापना गराउन हाम्रो पाटी नेपालको स्थापना भएको हो । यी सबै कुरालाई स्पापित गराउन हामीले निर्वाचनलाई बैधानिक विद्रोहको तयारी भनेका छौँ । चुनाव भनेको नेतृत्व चिनिने र पार्टीलाई पनि चिनाउने एउटा उपयूक्त माध्यम हो ।
भनेपछि चुनावलाई उपयोग मात्रै गर्दै हुनुहुन्छ ?
अहिलेको संविधानले धर्मनिरिपेक्षता र संघियता लादेर नेपालकै खतराको रुपमा अणु बमकै निर्माण गरेको छ भन्ने हाम्रो ठम्म्याँइ हो । निर्वाचन लगतै सम्पूर्ण राष्ट्रबादी शक्तिहरुलाई एकृकित गरेर हामी राष्ट्रिय प्रतिरोधको आन्दोलन सुरु गछौँ र त्यसले नै बैधानिक विद्राहको आधारशिला तय गर्छ । हाम्रो बैधानिक विद्रोह केवल आन्तरिक सक्ता परिवर्तनका लागि मात्र हैन बैदेशीक हस्तक्षप विरुद्धको विद्रोह हो । अहिलेको नेपालको सक्ता भनेको कागजको फूल जस्तो मात्रै छ । हेर्दा राम्रो तर भित्र केही छैन । सबै विदेशीबाट परिचालित छन । अव हामीले गर्ने बैधानिक विद्राहमा पूर्व राजा देखि सेना, प्रहरी एवम् सम्पूर्ण राष्ट्रवादी शक्तिहरुलाई समेटेर हामी अहिलेको सक्ता विरुद्ध धावा बोल्दै छौँ । एउटा पार्टीको परिचय गराउने र अर्को भनेको नेपाल राष्ट्र मुक्त हुने औषधि पनि हो ।
त्यो औपाधि के हो, तपाईको पार्टीको मुख्य निति के हो ?
२००७ साल भन्दा अघि देखि नेपालमा वैदेशिक हस्तक्षप हावि भयो । आजसम्मका पुराना पार्टीले आन्दोलन गर्दा पुर्णता दिन सकेनन् अनि विदेशिलाई गुहारे । विदेशीको चक्रव्यूमा फसे । विदेशी शक्ती हावि भो । नेपालमा शक्ता संचालन गर्ने बैदेशीक शक्ति नै हो । हाम्रो पहिलो औषधि भनेको के हो भने, नेपालमा विज्ञहरु राखेर एउटा शक्तिशाली राष्ट्रिय आयोग बनाउनुपर्छ । नेपाल बचाउने दोश्रो औपाधि हो, धेरै पहिला देखि राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाहरु हावि छन नेपाल सिध्यानको लागि उनिहरुको व्यवस्थापन गर्ने हो, अर्को औषधि भनेको पेशागत हकहितको भन्दै हरेक क्षेत्रमा राजनितिक संगठन बनाइएको छ, यी संगठनहरुलाई निषेध गर्ने हो । अर्को राष्ट्रिय पुजि निर्माण गर्नका लागि १५० खर्वभन्दा बढिको हामीसंग श्रोत छ । त्यो श्रोत परिचालन गर्दै राष्ट्रिय पुजि निमार्ण गर्दै बैदेशीक पुजिलाई परास्त गर्ने हाम्रो अर्को औषधि हो ।
अहिले पार्टीहरु गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा होमिएका छन । यसलाई तपाईको पार्टीले कसरी लिएको छ ?
वाम गठबन्धन वा लोकलान्त्रीक गठबन्धन जे भनेपनि यो गठबन्धन अपवित्र छ र विदेशीको इसारामा बनेको छ भन्ने हाम्रो निश्कर्ष हो । वाम गठबन्धनले समाजबादमा जाने भनेको छ तर सबै उद्योग धन्दाहरु बन्द गराएर कसरी समाजबादमा पुग्न सकिन्छ ? यो सरासर राष्ट्रवादी जनताको विचमा छरिएको भ्रम मात्र हो । काँग्रेसको त कुरै नगरौँ । न्यायलय माथि हस्तक्षप गर्ने, भएका उद्योग धन्दा बन्द गराउने राजनितिलाई सक्ता र कुर्सीको केन्द्रबाट टाढा नराख्ने काँग्रेसबाट अव पनि परिवर्तनको आशा गर्नु मुर्खता मात्रै हो ।
Posted in मुख्य समाचार, समाचार | Tagged Bramand, Govinda Bohora, Hamro parti | Leaveareply